Si fudud oo waqti kooban leh ku baro adeegsiga Computer-ka. Way kugu habboontahay haddii aad ku cusubtahay iyo haddii aad wax yar ka taqaan adeegsiga Computer-ka.n
Ma rajeyneysaa in aad ka shaqeyso meel aan Computer oollin? Waan filaayaa in jawaabtaadu “Maya” tahay. Meel kasta oo aad maanta tagto sida Banki, Iskuul, Xafiis shaqo, xitaa maqaayad, waxaa laga helaayaa Computer, waxaan hubaa in ay muhiim kuu tahay barashada Computer-ka. Taabo batanka ay ku qorantahay Take This Course si aad isaga diiwaangeliso koorsadan, ugana faaideysato casharrada Computer-ka. Imtixaanno ayaad geli doontaa, hadii aad ku guuleysato in ka badan 65% waxa aad heli doontaa shahaaddo ama aqoonsi caddeyneysa in aad si guul leh u dhameysatay barashada Computer-ka. Shahaaddo daabacan ayaad dalban kartaa sidoo kale. Soo dhawow oo si fudud u baro adeegsiga Computer-ka.
Si aad u barato casharradan Waxaad keliya u baahantahay:
Computer uu ku jiro Windows 10
Hoos ka aqri waxyaabaha aad ku baran doonto koorsadan